Bayern Munich 1-2 Eintracht Frankfurt, Hogaamiyayaasha Bundesliga Oo Guuldarro Gurigooda La Kulamay Tan Iyo 2019
HomeWararka CiyaarahaBayern Munich 1-2 Eintracht Frankfurt, Hogaamiyayaasha Bundesliga oo guuldarro gurigooda la kulamay tan iyo 2019
October 3, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Germalka 0
Bayern Munich ayaa guul daro dhabarka loo saariyay kulanka ka tirsan Horyaalka Germalka oo ku soo dhamaaday 2-1.
Filip Kostic oo u ciyaara Eintracht Frankfurt ayaa gool uu dhaliyay daqiiqadii 83-aad waxauu guuldaro dhabarka ugu saariyay kooxda Bayern Munich ciyaar ku soo dhamaatay 2-1 taasoo ka dhigeysa guushii ugu horreysay ee Bayern ay ka gaarto muddo 21 sano ah isla markaana soo afjartay guushii sagaalka kulan ee tartamada oo dhan.
Kooxda martida loo ahaa ayaa hogaanka qabatay markii Leon Goretzka uu ka faa’ideystay qalad uu sameeyay Martin Hinteregger si uu gool u dhaliyo daqiiqadii 29 -aad.
Daafaca reer Austria ayaa si dhaqso ah u saxay isagoo madax ku dhaliyay goolka barbaraha seddex daqiiqo ka dib.
Labada kooxood mid walba waxay heshay fursad ay hogaanka ku qabato ka hor waqtiga nasashada iyadoo Eintracht’s Almamy Toure uu ku qasbay badbaadinta cajiibka ah ee Neuer daqiiqadii 43aad iyo Serge Gnabry oo Bayern ah daqiiqad kadib isagoo birta ku dhuftay kubad.
Laakiin Eintracht ayaa heshay goolkii guusha u horseeday markii Kostic uu dhaliyay gool daqiiqadii 83aad ka hor inta uusan Trapp sameyn badbaadin kale oo muhiim ah.
Waa guuldarradii ugu horreysay ee Bayern ee Allianz Arena ee Bundesliga tan iyo markii ay 2-1 ku garaacday Bayer Leverkusen 30-kii November 2019.
Bavarians ayaa weli hogaanka u heysa 16 dhibcood 7 kulan oo ay ciyaareen inkastoo guuldaradoodii ugu horeysay ay hal dhibic ka sareyso Borussia Dortmund iyo Freiburg oo kala ah labaad iyo seddexaad.